UGAAR AH DUMARKA: 6 Sifo oo qiimo leh oo lagu garto Ninka u qalma inaad guursatid - Aayaha
Home XIRIIRKA IYO GUURKA UGAAR AH DUMARKA: 6 Sifo oo qiimo leh oo lagu garto Ninka...
UGAAR AH DUMARKA: 6 Sifo oo qiimo leh oo lagu garto Ninka u qalma inaad guursatid
Ninka ragga ah ee leh tilmaamahan gabaryahay wuu u qalmaa inuu ku guursado, ee hoos ka aqri sifooyinka lagu garto.
Waxaad leedihiin xiriir Isfahan ku dhisan
Isfahaka waa mid aad muhiim u ah, mana ahan waxaad u baahantahay inaad dhistid markaad aqal gashid; wuxuu kasoo bilaawdaa xiriirka, sidee ayuu ahaa xiriirka aad la lahayd isaga? Miyuu ahaa xiriir isfaham ku dhisan oo ka maran dagaal iyo muran ?
Si waali ah ayuu kuu jecelyahay
Waa inaad hubisaa inaad guursaneysid nin dareen wanaagsan kuu qaba, hadii uu dhab kuu jecelyahay, dabadeed guurkaaas waa mid qiimo leh
Waa qof aamin ah
Aaminaadda iyo daacadnimada uu ninka leeyahay ma ahan hal habeen, haddii uusan aamin ahayn kalsoonina lahayn xilliga aad shukaansaneysid, sida lee ayuu kuu noqonaa marka aad guursatid, haddii ninkaaga uu aamin yahay, waa u qalmaa inaad gacanta ku dhigtid.
Waa qof dabacsan oo fur furan
Dhab ahaantii guurka wuxuu ku habboon yahay maskax furan; inaad yeelatid guur farxad lehwaxay u baahantahay inaad u jilicsanaato lamaantaada oo aad u fur furnaato, aad ayay u fududaaneysaa inuu guurkaas guuleysto.
Waqti ayuu ku siiyaa
Dareenka mid muhiim u ah haweeneyda; ninka dareen wanaagsan kula dhaqma gabadhiisa waa mid u qalma guur, waxaan ula jeedaa yaa raba in la guursada waa dareena baryaaya.
Haddii uu ku garab taaganyahay isla markaana uu ku taageero waa nin u qalma inuu ku guursado.
Ninka leh tilmaamahan dhab haantii waa mid u qalma in gacanta lagu dhigo.
Previous article8 Qaab oo dil dillaaca looga ilaaliyo Cagahaaga
Next articleLAYAABKA- Sawirro:- Dhaqtar nolosha ku aasa bukaannadiisa (Sheeko kaa yaabin doonta)
Labadaan Sabab Dartood Ha U Guursan Haddii Aad Rabto Guur Farxad...
7 TIPS TO REDUCE THE RISK OF FOOD POISONING
Gabaryahay Sameey Shantaan Waxyaabood Haddii Aad Rabtid Nin Wanaagsan